Jereo ny fomba hisafidianana seza tsara indrindra ho an'ny efitrano fandraisam-bahininao | Bezzia
Safidio ny sezafianao ho an'ny faritry ny efitrano fandraisam-bahiny
Susana Garcia | 29/03/2021 20:00 | Decor, fanaka
El sofa dia sombin-javatra tena lehibe eo amin'ny fiainantsika, satria toerana fampiononana. Io no toerana fialan-tsasatra ataontsika rehefa mody isika ary izany no antony tsy maintsy ivon'ny haingon-trano. Ny fisafidianana ny sofa ho an'ny sehatry ny efitrano fandraisam-bahiny dia asa sarotra satria tsy maintsy misafidy tsara ny fomba, ny lamba na ny loko isika, ary koa ny habeny sy ny fampiononana.
Ho hitantsika eo hevitra samy hafa rehefa mandravaka ny efitrano fandraisam-bahiny amin'ny sofa tsara. Ity fanaka ity no zava-dehibe indrindra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ny faritra afovoany indrindra ary ny zavatra voalohany manintona ny saina, noho izany dia tsy maintsy safidintsika tsara izany. Betsaka ny karazana sofa ary izany no antony betsaka isafidianana antsika.
1 Sopa hoditra
2 Sôlôra antitra
4 Sora fandoko
5 Sofera modular
6 Feo tsy miandany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
ny sofa vita amin'ny hoditra dia sombina maharitra ela raha mikarakara azy ireo araka izay sahaza azy isika. Mora ny manadio izy ireo ary maharitra mandritra ny taona sy taona maro. Amin'ity tranga ity, fampiasam-bola lehibe ny fividianana karazana sofa ity. Lafo kokoa izy ireo fa maharitra ela kokoa noho ny lamba. Izany no antony amin'ity tranga ity dia tsara kokoa ny misafidy sombin-doko miaraka amin'ny fomba mahazatra sy tsotra izay tsy miala amin'ny lamaody. Amin'ity tranga ity dia hitantsika amin'ny loko volontsôkôlà fa misy ihany koa ny hoditra amin'ny feo manta na maizina kokoa. Toa sanganasa kanto sy tsara kalitao izany aminay.
Ny fomba fiotazam-boaloboka dia mety ho safidy lehibe amin'ny efitrano fandraisam-bahinintsika. Raha nanampy fanaka antitra hafa ianao dia afaka mampiditra sofa antitra. Matetika vita amin'ny hoditra sy hoditra efa antitra ireo ary mateza be. Manana toetra amam-panahy maro izy ireo na dia mila manampy ondana kely aza ianao mba hamoronana fifanoherana sy malefaka malefaka kokoa. Raha manana fifandraisana maoderina ireo ondana, dia ho afaka mamorona mifanohitra tsy havaozina amin'ny fanaingoana ny sezafiarantsika isika.
Iray amin'ireo Ny sofas tena ahazoana aina azonao vidina dia ilay manana chaise longue. Tonga lafatra ity karazana sofa ity raha manana toerana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny isika satria mamela antsika handry tanteraka. Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra raha te handany fotoana be eo amin'ny sezalà ianao dia ny filan'ny chaise longue. Vidio ao amin'ny alokaloka tsy miandany ny sezalà ary hankafizinao ity sombina ity mandritra ny taona maro. Amin'ity tranga ity dia nisafidy feo fotsy izy ireo, na dia maro aza ny loko marobe toy ny volondavenona no voafidy matetika.
Una hevitra sahisahy kokoa dia ny misafidy seza amin'ny feo mahafinaritra na tsara tarehy manintona ny saina. Tsy misy isalasalana fa safidy mampidi-doza io satria tsy maintsy atambatra ny lokon'ny sezalà amin'ny sisa amin'ny haingon-trano. Azonao atao ny manambatra ny cushions mba hampifangaroana azy ireo ary avy eo afangaro amin'ny loko mahafinaritra amin'ny fomba mahafinaritra sy am-boalohany ny loko maro. Ity iray, ohatra, dia manana mavo mahery izay manintona ny saina ary mahatonga ny sofa ho singa lehibe indrindra ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny.
Raha mila iray ianao hevitra izay tena be mpampiasa satria te-hanova ny habaka araka ny itiavanao azy ianao, dia atolotray anao ireo sofa modular tsara. Ireo karazana sofa ireo dia amboarina amin'ny sombintsombiny amin'ny endriny tena tsotra, miaraka amin'ny tsipika fototra ihany. Amidy amin'ny feo tsotra koa izy ireo matetika mba hahafahan'izy ireo mitambatra mora foana. Ny sasany manana lamosina ary ny sasany tsy manana, ka azo atao ny mamorona chaise longs na sofa hafa. Izy io dia hevitra mahafinaritra sy tena manokana ho an'ny efitrano rehetra.
Feo tsy miandany ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny
Iray amin'ireo hevitra tsara indrindra ho an'ny ny karazana efitrano fandraisam-bahiny dia misafidy sofa amin'ny tonony. Miasa foana io hevitra io, satria sombin-javatra izay hiaraka amin'ny zava-drehetra. Ny loko volondavenona dia malaza be izao ary mora ny mitambatra, ary koa ny lokony izay tsy dia hita loatra ny fampiasana azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Safidio ny sezafianao ho an'ny faritry ny efitrano fandraisam-bahiny
Ny fomba fitafiana amin'ny lohataona izay afaka manentana anao